Ibsa Tarkaanfii Waraanaa ABO -Tarkaanfillee Gurguddoo Lukeelee Diinaarratti raawwatamaniifi Hubachiisaafi Akeekkachiisa tokko tokko!!..Waliif daddabarsaa..Qabsoon itti fufa!! – Beekan Guluma Erena
Ibsa Tarkaanfii Waraanaa ABO -Tarkaanfillee Gurguddoo Lukeelee Diinaarratti raawwatamaniifi Hubachiisaafi Akeekkachiisa tokko tokko!!..Waliif daddabarsaa..Qabsoon itti fufa!!	Beekan Erena
Politics Category October 12, 2016October 12, 2016Oromo Revolution
231SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
1. Kibba Oromiyaa Godina Gujii keessatti sabboontonni Oromoo waraanaa fi poolisa wayyaanee keessa turan aantummaa ummataaf qaban agarsiisuun humna QBOtti makamuudhaan tarkaanfii fudhataniin loltoonni amanamtoota wayyaanee 8 fi Agaaziin 5 ajjeefamuun 2 ammoo madeeffamaniiru. Tarkaanfii humni QBOtti dabalame fudhate kanaan Kilaashiin 10, Boombiin F1 Afuri fi rasaasni 267 diinarraa booji’amee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamuuf oolfameera. Qunnamtii fi qindoomina jiruun poolisoonni mana hidhaa Bulee Horaa eegan dhiisanii deemurraa hidhamtoonni guututmmaatti akka bahan taheera.
2. Baha Oromiyaa Kaampii Addeellee keessatti marii bal’aa taasifamee fi murtii kennameen waraanni wayyaanee sirnicha jalaa bahee QBOf tumsuuf sagalee guutuudhaan murteesse. Aashaa Dawwallee, Shiniillee, Harargee Dhihaa fi Dirree Dhawaa dabalatee bakkoota hedduutti aangawoota mootummaa wayyaanee fi waraana amanamaa sirnichaa ta’e irratti haxxee hidhuu fi tarkaanfilee fudhachuufis murannoo qabu ifatti agarsiisee jira.
3. Godina Shawaa Bahaa Bishooftuu keessatti ilmaan oromoo waraana Agaazii fi Poolisa Oromiyaa keessa turan gara mooraa QBOtti makamuun tarkaanfii waraana wayyaaneerratti fudhataniin loltoota 38 ajjeesaniiru. Humna QBOtti makame keessaas Sadi wareegamanii jiru. Kunis waraana wayyaanee Shawaa Bahaa keessatti argamu jidduutti sochiin bal’aan akka taasifamu godhe. Godinuma kana Aqaaqiittis tarkaanfii Kaampii Kuusaa meeshaa waraanaa irratti fudhatameen qawween 200 booji’amuun milkiin gonfatameera.
4. Tarkaanfiin humna QBOtin fudhatamu Godina Arsii Lixaattis cehuun, Kaampii waraana wayyaanee Shaashamanneetti argamu keessatti amanamtoota TPLF fi ajajoota wayyaanee haleeluun kaampicha keessaa baasan. Arsii Lixaa naannawa Meexamaattis ilmaan Oromoo waraanaa fi Poolisa keessa turan waamicha lammummaaf owwaachuu itti fufuun, poolisoonni 7 qawwee Kilaashii harkaa qaban waliin mooraa QBOtti makaman. Ummanni naannichaa humnoota diinaa ofirraa ari’ee alaabaa ABO balaliisuun bulchiinsa Ummataa dhaabbatee jira.
5. Godina Shawaa Bahaa Ona Boosat keessatti lolli jabaan ummataa fi waraana wayyaanee jidduutti gaggeeffameera. Ilmaan oromoo Poolisa Oromiyaa turan 90 ta’an gara mooraa QBOtti makamuun ummata faana dhaabbatan. Achuma Shawaa Bahaa naannoo Dooniitti ammoo tarkaanfii fudhatameen qawween 200 harka ummataa galeera. Humni Poolisa Oromiyaa keessaa QBOtti makame dargaggoota Oromoof leenjii kennuu fi waraana wayyaanee haleeluun qawwee hiikkachuunis barameera. Agaaziin tarkaanfii irratti fudhatameen ari’amee naannichi ummataa fi waraana gara QBO seeneen dhuunfatamee tikfamaa jira.
6. Onkoloolessa 5 bara 2016 tattaaffiin waraanni Agaazii Kaampii Shaashamannee dhuunfachuuf Dodolaa keessatti daandiirra fiiguun taasise Poolisoonni Dodolaa QBOtti makaman dura dhaabbachuurraa kan fashalsan yoo tahu, kilaashii 16s QBOf gumaachan.
7. Mootummaan wayyaanee diddaa humnoota waraanaa, poolisaa, Tikaa fi Agaazii dabalatee hidhattoota isaa keessaa irratti jabaachaa jiru irra aanuu akeekkatuun Godina Arsii Lixaa Ona Qoree keessatti lola banus kasaaraa haguuggate.
8. Shawaa Bahaa Liiban Cuqqaalaa keessatti lola jabaa gaggeeffameen ammoo loltoonni Agaazii 32 qabsaawota bilisummaa Oromootin ajjeefamanii, 18 madoo taasifaman. Loltoonni Agaazii 12 ammoo mooraa QBOtti makamanii jiru. Lola kanaan qawween Kilaashii 8 kan booji’ame wayta ta’u konkolaattooni waraanni wayyaanee itti gargaaramaa ture 7 daareffamaniiru. Gama qabsaawotaatii 4 wareegamuun, 3 madeeffaman.
9. Meettaa Roobii keessattis lola jabaa gaggeeffameen Agaaziin 11 ajjeefamuu fi 8 madeeffamuun, Kilaashiin 22 booji’ameera. Loltoonni Agaazii 7 ummata faana hiriiruuf murteeffatuun mooraa QBOtti makaman.
10. Mootummaan wayyaanee diddaa humni waraanaa isaa Kaampii Awaash keessa jiru irratti kaase dhaamsuuf Onkoloolessa 7 bara 2016 humna dabalataa wayta ergetti, Shawaa Bahaa Ona Fantaallee magaalaa Matahaaraatti haxxee itti hidhamee tarkaanfii fudhatameen Agaaziin 32 ajjeefamuun reeffi loltoota isaas achuma akka bulu taasifame. Ona Fantaallee keessatti qindoomina ummataa fi humna mooraa QBOtti makame waliin tolfameen lolli jabaan gaggeeffamee diinarra kasaaraan guddaan dhaqqabeera.
11. Baha Oromiyaa Awwadaay keessatti sabboontotni Oromoo waraana wayyaanee keessaa diddaa jabaa agarsiisan. Waraanni Kaampii Awwadaay yeroo bahus Kaampicha keessatti alaabaa ABO fannisuun akka bobba’etu ibsame. Humni QBOtti makame hogganootaa fi amanamtoota wayyaanee ummata Oromoo miidhaa turan irratti tarkaanfii fudhateera.
12. Godina Shawaa Bahaa Ona Boosat keessatti Onkoloolessa 8 bara 2016 waraanni wayyaanee gandeen sirnicha jalaa baafamuun ummataan dhuunfataman harkatti galfachuuf lola banerratti hidhattoota Federaalaa irraa 7 ajjeefamuun 3 madeeffamanii, qawween Kilaashii 9 erga irraa booji’amee kasaaraa haguuggatanii booda of duuba deebi’aniiru. Qabsaawotarraas 1 wareegameera.
13. Shawaa Kibba-Lixaa Waliso keessatti tarkaanfii fudhatameen ammoo waraana wayyaaneerraa ajajootni 3 fi miseensonni 5 mooraadhuma waraanaa keessatti ajjeefamaniiru.
14. Ilmaan oromoo wayyaaneef qawwee baatan diina saba isaanii fixaa jirutti akka naannessaniif hojii hojjetamaa tureen, kanneen waraana keessaa mooraa QBOtti dabalaman Awwadaay keessatti qawwee hidhatan diinatti naannessuun haleellaa raawwataniin qondaala wayyaanee ol’aanaa Ajajaa Kumaa Atsbahaa Asgadoom jedhamu kan waraana Agaazii Dirree Dhawaa, Hararii fi Haramaayaa ajajuu fi waraana Agaazii 17 ajjeesuun seenaa boonsaa galmeessan. Kana malees sabboontotni Agaazii keessaa QBOtti dabalaman kilaashii 7 ummataaf gumaachudhaanis aantummaa qaban agarsiisan. Guyyuma kana Waraanni wayyaanee weerartummaaf Baha Oromiyaa Ciro, Hirnaatti bobb’aa ture tarkaanfii irratti fudhatameen ergamni isaa fashaleera; Waraana Awaash tiksu 2 irrattis tarkaanfiin fudhatameera.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa231SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← Gaafa: 10/10/2016 Date: ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Declaring a state of emergency cannot reverse Oromo peoples’ struggle for freedom and democracy.
Declaring ‘State of Emergency’ will Only Facilitate the Demise of the Minority TPLF Regime in Ethiopia: Ibsaa Nagawo →